﻿﻿ Puntland State of Somalia – Shirka Golaha Xukuumadda Puntland oo qadobo laga soo saaray.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Golaha faray in laga shaqeeyo joojinta Deegaamaynta Dhul-daaqsimeedka Puntland, si looga hortago xirmaysiga iyo deegaamaynta dooxooyinka.
Iyadoo laga duulayo siyaasadda Dowladda ee arrimaha dhulka, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu magacaabay Guddi hoosaad ka shaqeynaya wixii la xiriira arrimaha dhulka, guddigaasi oo ay ka midyihiin Wasaaraddaha Arrimaha Gudaha, Amniga, Howlaha Guud, Cadaaladda iyo Xannaanada Xoolaha.
Warbixinta Guddiga Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha:
Goluhu wuxuu warbixin ka dhegaystay Guddi hoosaadka Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Golaha Wasiirada, waxay ka warameen kulamadii ay yeesheen, waxyaabihii u qabsoomay iyo qorsheyaasha ay dejisteen.
Guddiga ayaa Muhiimad gaar ah siiyey arrimo dhowr ah sida Mideynta Habka Cashuuraha Dowladda Puntland, Miisaaniyada, Suuqgeynta Xoolaha, Maalgashiga iyo arrimo kale.
Shirka Maalgashiga iyo Hal-abuurka Ganacsiga:
Guddiga diyaarinaya Shirka Maalgashiga Puntland ee la qabanayo 15-17 September 2019, ayaa Golaha uga warbixiyey halka ay howshu u marayso iyo qorshayaasha ay dejisteen sida Hab-maamuuska casumaadda iyo wixii arrimo farsamo oo kale.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa faray Guddiga ka shaqaynaya Shirka Maalgashiga in dadka maalgelinta u imanaya oo ka qayb geliya shirka loo fududeeyo inay Dal-ku-galka ka qaataan Garoomada Diyaaradaha.
Sidoo kale Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga ayaa Golaha uga warbixisay barnaamijka Hal-abuurka Ganacsiga iyo Tayeynta Shaqaalaha Puntland, oo ah qorshe lagu maalgelinayo Hal-abuurka ganacsatada yaryar ee Puntland.
Wasaaradda Warfaafinta, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska ayaa Golaha horkeenta Xeerka Isgaarsiinta oo qabyo-qoraal ah, Xeerkaasi oo ah midka loo diyaarinayo in lagu dhaqo Isgaarsiinta Puntland. Mudanayaasha Golaha Wasiirada ayaa Xeerkan soo akhrin doona, waxaana ansixintiisa looga doodi doonaa kulamada danbe ee Shirka Golaha Wasiirada.
Ugu-danbeyn Goluhu wuxuu warbixin ka dhegaystay Guddiga diyaarinaya Munaasibada 1-da August oo loo dabaaldegayo Sanadguuradii 21-aad ee kasoo wareegatay markii Puntland la’asaasay. Sidoo kale Goluhu wuxuu warbixin ka dhegaystay Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ka warbixisay daahfurka Barnaamijka Waxbarashada degdega ah (Education Cannot Wait) oo Puntland lagu qabanayo 20-ka Bishan.